Tombontsoa ho an'ny mari-pahaizana momba ny mari-pahaizana MCSE | Microsoft Gurgaon | NY
Inona avy ireo tombontsoa azonao amin'ny fianarana MCSE?
Iza no tokony hitrotro?
Tombontsoa ho an'ny fianarana MCSS
Azonao jerena ireo fahafaha-manao tsara
Hahazo fanatanjahan-tena tsara ianao
Salama tsara kokoa
Ny mpikarakara IT dia mila manadihady ny fahaizan'izy ireo sy ny fahaiza-manaony isaky ny fotoana iray fa ny tontolon'ny IT dia mampiseho famantarana ny fiovana. Ireo olona tsy manao izany dia mety hihazakazaka ao ambadiky ny asany. Ny fahaiza-manao tahaka izany izay mitazona anao amin'ny toetry ny firindran'ity tontolo misongadina ity izay mitombo hatrany MCSE certification course. Ny fahazoan-dàlana dia efa nametraka ny tenany ho anisan'ny fahaiza-manao ilaina indrindra amin'ny manam-pahaizana IT.
MCSE, Microsoft Certified System Engineer, no mari-pankasitrahana tena mandresy lahatra izay azon'ny IT tompony atao. Natolotr'i Microsoft, ity Microsoft certification dia tena ilaina ny manana fitaovana ho an'ny injeniera sy rafitra mpanova. Izany dia fandaharam-pampianarana 7 izay mandinika ny mombamomba anao ao amin'ny modules samihafa, ohatra ny Exchange Server, System Center (SCCM) Windows, SQL Server, Sharepoint, ary Lync.
Ny fanamboarana MCSE ho an'ny mpampiasa IT maro izay mila manangona ny sisintany amin'ny hafa amin'ity tontolo feno zava-doza ity. Na ahoana na ahoana, dia misy karazana profiles izay mandany ny antonony amin'ny faharesen'ny mari-pankasitrahana MCSE, ary azo lazaina hoe:
Ireo manam-pahaizana ireo dia afaka manitatra ny lanjany sy ny fahamendrehany amin'ny ankapobeny amin'ny fahazoana làlan-kizorana MCSE.
Tokony hifantoka amin'ny fikarakarana ny voka-pikarakarana ny olona fa tsy ny fiorenana rehetra omena amin'ny fampiofanana mavitrika sy ny fikarakarana hiderana ny fisidinan'ny vorona. Ny fanamarinana dia tsy mora ny handalo. Mitaky fanadihadiana sy fampiharana goavana izany mba hanazava ireo fanadinana fito rehetra. Noho izany, mila miankina amin'ny tsara indrindra ianao. Innovative Technology Solutions dia tombontsoa manokana izay nanangana ny lova ho toy ny mahazatra amin'ny fomba tena azo itokisana indrindra mba hikarakarana ny lalan'ny MCSE.
Ny zavatra rehetra dia heverina fa hanokatra universe radical vaovao ho anao ny fanamarinana. Ohatra, amin'ny fampiasana MCSE: Server Infrastructure Amin'ny sehatra fanofanana sy fanofanana momba ny serivisy 2012 R2, dia afaka manitatra ny asanao ianao ary afaka miara-miasa amin'ny fahaiza-manao, ny fitantanana ny rafitra, ny virtoaly, ny fitantanana ny rafitra sy ny fitantanana ny toetra izay tsy ao anatiny ny fomba fanaonao talohan'izay. Toy izany koa, ny fianarana dia manome anao ny fahazoana miditra amin'ny sehatry ny rahona informatika, rahona tsy miankina, Sharepoint sy ny faritany samihafa miaraka amin'ny fomba amam-panao nanao ny certificates MCSE.
Ny indostrian'ny IT dia mangataka manokana. Ambonin'izany, ny fahaiza-manaon'io fangatahana io dia ankoatra ny birao. Tsy misy ny fianarana ambony sy ny fianarana ambony amin'ny fianarana ambony dia afaka mandrakotra ny habeny. Mila mandeha ny mpanofana mpanampy ary ny fampiofanana ho an'ny MCSE no fomba tsara indrindra hanatanterahana azy ireo. Hampahafantaranao ny teknolojia misimisy kokoa amin'ny fahafaha-manao voafetra.
Ny fitongilanana, ny famoam-bola ary ny devoly samihafa dia ao amin'ny orinasa IT izay mahatonga anao tsy azo itokisana momba ny asa. Ny orinasa IT dia tsy manome fahazoan-dàlana hanova ny ekipany amin'ny tranga izay tsy ampiharina intsony na tsy mamelombelona ny fahaiza-miasa araka ny lamin'ny fanohizana. Ao anatin'io toe-javatra io, mila manana fandaniana hafa hitombo. Ny fampiofanana sy ny fanamarinana ny MCSE no fitaovana tokana horaisinao.
Toa midika izany fa hampitombo ny habetsaky ny zeros ao amin'ny karamanao ianao. Ny MCSE dia nanamarina fa azo atao ny profesora matihanina amin'ny famoahana tanteraka $ 96,215 isan-taona. Hitohy eo amin'ny fanandramana ny traikefanao.
Ny fitanana mari-pankasitrahana MCSE no safidy tsara indrindra izay mety ho ataon'ny mpampiasa IT rehetra. Ny fandaharam-potoan'ny MCSE dia mitana ny fankasitrahana maneran-tany ary mihazona ny lanjany lehibe indrindra amin'ny toe-javatra mitohy amin'ny asa.